उडिरहेको विमानको ट्वाइलेटबाट तपाइ कै टाउकोमा मलमुत्र खस्यो भने के हुन्छ ? त्यही भयो यहाँ – Online Khabar 24
काठमाडौं । विश्वमा समय समयमा पत्याउन गाह्रो पर्ने खालका घटनाहरु हुने गर्छन । यस्तै एक घटना बाहिर आएको छ ।
वास्तवमा, संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लन्डनको पश्चिमतिर पर्ने बर्कशायरका एक व्यक्ति आफ्नो बगैँचामा सुस्ताइरहेका बेला अनौठो घटना भएको हो ।
उनका अनुसार मानै विमान जमिनतर्फ अवतरणका लागि झर्दै गर्दा उदाहरणका लागि ६,००० फीटमा पुग्यो, तब हावाको चाप परिवर्तन हुन्छ ।त्यसैबेला विमानको मलमूत्र ट्याङ्की चुहिन्छ। दुर्भाग्यवश ती व्यक्ति त्यो बेला बगैँचामा रहेछन् । र उनको बगैँचामा भएका दुई छातासहित सबैमा मलमूत्र पर्यो । यो खबर खबर नेपालीमा छ ।
Prevपल शाहसँगको समन्धबारे समाचार बाहिरिएपछि समिक्षा अधिकारीले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस
nextयि राशीका ब्यक्तीहरू अाजको दिन निकै सतर्क हुनुहोला अन्यथा अाइपर्न सक्छ यस्तो अापत् ! हेर्नुहोस आजको राशिफल